ရှိသည်ခုနှစ်တွင်ဆွစ်ဇာလန်ရန်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများဘာတွေလဲ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရှိသည်ခုနှစ်တွင်ဆွစ်ဇာလန်ရန်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများဘာတွေလဲ
အားဖြင့် Karolina Klesta
ah, ဆွစ်ဇာလန်, အကြားအဆင်ပြေထိုင်သောလှပငြိမ်းချမ်းသောတိုင်းပြည် အီတလီ, ပြင်သစ်, နှင့် ဂျာမနီ. ဆွစ်ဇာလန်ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံများထဲမှတစ်သမတ်တည်းသတ်မှတ်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုလေ့လာရန်လည်ပတ်သင့်သည်. သင်ထင်လာသောအခါဒါသငျသညျ '' အဘယ်သို့ထင်ကြဘူးဆွစ်ဇာလန် ''? ကျွန်မခန့်မှန်းနေပါတယ် ဆီးနှင်းဖုံးထိပ်များ, ဒိန်ခဲ, နဲ့ချောကလက်. ချောကလက်အဘို့အချိန်အများကြီးရှိလိမ့်မည်နှင့် ဖွန်ဒူး သင့်ရဲ့ဆွစ်ဇာလန်အပေါ် vacay, ဒါပေမယ့်ယဉ်ကျေးမှုအပေါငျးတို့သပါဝင်သည်ဖို့သေချာပါစေ, သဘာဝက, ဒီတိုင်းပြည်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးသမိုင်းအပျေါလှငျ. မော်ကွန်းရထားစီးနှင့်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ခြေကျင်တောင်တက်ခရီးကြမ်းထဲကနေမေးရိုး-ကျဆင်းနေဗိသုကာရန်, ဆွစ်ဇာလန်တိုင်းရာသီအတွင်းခရီးသွားအမျိုးအစားတိုင်းပူဇော်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့များအတွက်မဖြစ်မနေ-dos အချို့ဖြိုဖျက်ကြပါစို့ ဆွစ်ဇာလန်မှခရီးစဉ်.
မီးရထားခရီးသွားလာဒီသေးငယ်တဲ့တိုင်းပြည်ကြည့်ဖို့အံ့သြဖွယ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ကားတစ်စီးငှားရမ်း နှင့်လမ်းခရီးစဉ်နိုင်ငံအများအပြားအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ဦးစားပေးမည်ပုံစံနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ ရထားခရီးသွားလာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအနေနဲ့အထင်ကရအတွေ့အကြုံ! အဆိုပါရထားရှင်းလင်းလျက်ရှိ, အချိန်မှန်, နှင့်အများဆုံးအချို့မှတဆင့်ခရီးသွားလာ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ. ထို့အပြင်, ရထားလမ်းကြောင်းအချို့ကိုပါသေးသည်အလွန်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားရှိ, သင်တစ်ဦးအဟောင်းရုပ်ရှင်၌ရှိကြ၏ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရစေပါလိမ့်မည်သမိုင်းဝင်ရထားကားများ! အကျော်ကြားဆုံးလမ်းကြောင်းအချို့သည် Jungfraujoch ပါဝင်သည်, အဆိုပါ GoldenPass လိုင်း, နှင့် Glacier Express ကို. ဤအလမ်းကြောင်းတချို့နှင့်အတူထည့်သွင်းထားပါသည် Eurail Pass ကို, နှင့်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအချို့သော Eurail Pass ကိုကိုင်ဆောင်သူမှအထူးလျှော့စျေးပူဇော်ပါလိမ့်မယ်. ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရထားအမြဲစျေးပေါမဟုတ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦး အနည်းငယ်သာကြိုတင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအချို့ကိုသင်ပြင်သစ်ကယ်တင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်, သင်ရှိမရှိ Cross-တိုင်းပြည်ခရီးသွားလာ သို့မဟုတ်ပဲယူပြီး တစ်နေ့တာခရီးစဉ်!
ရထားအားဖြင့် Interlaken မှဘေဆယ်
ရထားအားဖြင့် Interlaken မှ Bern
ရထားအားဖြင့် Interlaken မှ Lucerne
ရထားအားဖြင့် Interlaken မှဇူးရစ်
ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်းအရှိဆုံးအထင်ကရ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ ဆောငျးရာသီအားကစားနေရာများ ကမ္ဘာပေါ်မှာ. တောင်စောင်းပေါ်မှာရက်ပေါင်းစဉ်းစားပါ, ညလက်ဖက်ရည်တစ်ဦးနွေးဖလား, cheesy ဟင်းချို၏ပူပြင်းတဲ့ပန်းကန်အတူတက်ကောက်. သင်တစ်ဦးနွေးထွေးသောရာသီဥတုထံမှဖြစ်ကြပြီးမတိုင်မီ skied ဖူးဘူးဆိုပါက, ဤကဲ့သို့သောရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးစဉ်ရုံသငျသညျရုပ်ရှင်များတွင်တွေ့မြင်တစ်ခုခုနဲ့တူထင်. သင်သည်သင်၏အသက်တာ၌အချိန်မရွေးနှင်းလျှောစီးဖို့သင်ယူနိုင်ပြီးဆွစ်ဇာလန်အများကြီးရှိပါတယ် အပန်းဖြေ ကြောင်းများမှာ အစပြုသူအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော, နှင်းလျှောစီးသင်ခန်းစာများနှင့်ယုန်တောင်ကုန်းနှင့်အတူ. အတော်များများကအပန်းဖြေပင်များအတွက်သင်ခန်းစာတွေကိုပူဇော် ကလေးများ, ဆွစ်ဇာလန်တစ်အောင် မိသားစုများနှင်းလျှောစီးခရီးစဉ်အပေါ်သွားကြဖို့အဘို့ကြီးသောရာအရပျ!
Zurich မှစိန့် Moritz ရထားလက်မှတ်တွေ
စိန့် Moritz ရထားလက်မှတ်များမှ Zermatt
လိုင်ယွန်မှစိန့် Moritz ရထားလက်မှတ်တွေ
စိန့် Moritz ရထားလက်မှတ်တွေမှဘေဆယ်
ဂူများမှာ မဟုတ် ငါဖြစ်စေဆွစ်ဇာလန်မှအကြှနျုပျ၏ခရီးစဉ်စီစဉ်သည့်အခါစဉ်းစားပထမဦးဆုံးအရာ. သို့သျောလညျး, ဆွစ်ဇာလန်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အများကြီးလှပစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဂူရှိပါတယ်, အထူးသဖြင့်ပူနွေးနွေရာသီလအတွင်း.
ဇူးရစ် Zermatt ရထားကြိမ်
ဂျီနီဗာမှ Zermatt ရထားအချိန်
Zermatt ရထားကြိမ်မှ Bern
Lucerne Zermatt ရထားအချိန်
ဤသည်ကြီးမားသောလိုဏ်ဂူတစ်ခုရှိပါတယ် အင်းအိုင် နှင့် ပွဲခန်းမ ကြောင်းအတွင်း၌အမှန်တကယ်အကြောင်းကိုလိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ် 400 လူများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဘူဖေးညစာစားပွဲအဖြစ်ဖြစ်ရပ်များထွက်ငှားရမည်, ပါတီများက, နှင့်မင်္ဂလာဆောင်. အဲဒီမှာဖြစ်ရပ်များ DJs feature, သိပ်ပြီးမ, နှင့်ဂီတသမား. သငျသညျ Vitznau ကနေထူးခြားတဲ့ destination သို့သမိုင်းဝင်ရထားယူနိုင်ပါသည်. သူတို့ရဲ့ website သို့သာဂြာမနျတွင်ဖြစ်ပါသည်, သင်မူကားဂူဂဲလ်ခရုမ်းကို သုံး၍ ခရီးသွားအချက်အလက်များအတွက်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည် - သင်အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းကိုဖွင့်နိုင်သည်!
အဆိုပါစိန့်. Beatus ဂူတိုင်းပြည်အတွင်းအများဆုံးအထင်ကြီးဂူစနစ်များကိုတဦးနှိမ့်ချလက်. ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ဖွင့်ပါ ရက်သတ္တပတ် ၏ မတ်လ အောက်တိုဘာလ၏ပထမရက်သတ္တပတ်မှ, ဒီအနောက်တိုင်းသွားရောက်လည်ပတ်တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အုပ်စုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ် ယခုနှစ်ပူနွေးလအတွင်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ. သင်တစ်ဦးတည်းဥမစူးစမ်းလေ့လာလို့ရပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ပဲ့ထိန်းတဦးအပေါ်အတွက် join ခရီးစဉ် သောနေ့တစ်လျှောက်လုံးမှန်မှန်ဖြစ်ပျက်. ခွေးအဖြစ်ကောင်းစွာဥမင်ထဲမှာသင်က join ဖို့ကြိုဆိုကြသည်, သင်မူကားထိုသူတို့အဘို့ဝင်ပေါက်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်! ဝင်ပေါက်စျေးနှုန်းတွင်ထည့်သွင်း (လူသားမြားသညျအဘို့ကိုသာ, တောင်းပန်ပါတယ်) စိန့် Beatus ဂူပြတိုက်မှဝန်ခံချက်ဖြစ်ပါသည်, အရာသင်သမိုင်းသွန်သင်မည်, လူထုပုံပြင်များ, ဥမင်စနစ်၏ဘူမိဗေဒ!
Titlis Glacier ဂူ
ဒီတစ်ခုဆောင်းတွင်းလအတွင်းအဘို့ဖြစ်၏. ရေခဲမြစ်ဂူ, ဒါ့အပြင်ရေခဲဂူအဖြစ်လူသိများ, ခဲကဒီလက်လှမ်းများမှာ. ရှေးဟောင်းရေခဲကနေဖန်ဆင်းတော်ဒီ otherworldy ဂူမှတစ်ဦးအလည်အပတ်ဖြစ်ပါသည် မည်သူမဆိုများအတွက်မဖြစ်မနေ Engelberg အနီးနှင်းလျှောစီး. သင့်ရဲ့အပူနွေးဆုံးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဝတ်၌ထ bundle နှင့်ရေခဲကနေလုံးဝကိုဖန်ဆင်းဥမင်ရဲ့အပြာ-hued စင်္ကြံမှတဆင့် traipse!
တိုင်းအဓိကမြို့တစ်ဦးရှိပါတယ် သမိုင်း သို့မဟုတ်ဘို့ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်သောသိပ္ပံပြတိုက် မြို့ချိုး နှင့်မိုးရာသီ. သို့သျောလညျး, အချို့နေရာများအမှန်တကယ်ရှိ ထူးခြားတဲ့ပြတိုက် ကြောင်းရိုးရှင်းစွာလွဲချော်မဖြစ်သင့်. လူတွေက H.R သွားရောက်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလာ. Gruyere အတွက် Geiger ပြတိုက်.
H.R. Geiger ကောင်းစွာသည်သူ၏ macabre နှင့်အနာဂတ်အနုပညာလက်ရာများများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများသောကျော်ကြားသောဆွစ်ဇာလန်အနုပညာရှင်ဖြစ်ပါသည်. သင့်အနေဖြင့်ရုပ်ရှင်ဂြိုလ်သားအတွက်သတ္တဝါတွေကိုဖန်ဆင်းသူအနုပညာရှင်အဖြစ်သူ့ကိုမသိရစေခြင်းငှါ,. သငျသညျထူးဆန်းတဲ့ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ဇာတ်ဆောင် အတတ်ပညာ အဆိုပါ Geiger ပြတိုက်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံနှင့် Geiger ရေးရာ bar ကိုလာမယ့်စတိုးဆိုင်မှာကော့တေးနှင့်အတူကနောက်ဆက်တွဲ. သူ့ရဲ့အနုပညာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မဟုတ်? သငျသညျကိုသှားရှေ့တော်၌ထိုပြတိုက်တစ်ခုကို virtual tour မှာယူပါ.
Zurich မှ Geneva Train အချိန်
ဖွန်ဒူးဖြစ်ပါသည် အကျော်ကြားဆုံးဟင်းလျာများ၏တဦးတည်း ဆွစ်ဇာလန်မှထွက်လာရန်, နှင့်ဤမျှမတော်တဆမှုဖြစ်ပါသည်. ပြည်သူ့ဆွစ်ဇာလန်၏အနောက်ဘက်ပြင်သစ်စကားပြောအစိတ်အပိုင်းအတွက်နှစ်ပေါင်းရာချီများအတွက်အများပိုင်အိုးထဲကနေအရည်ကျိုဒိန်ခဲစားသုံးခြင်းပြီ. သို့သျောလညျး, 1930 ခုနှစ် ဆွစ် ဒိန်ခဲပြည်ထောင်စုမှထုတ်ပြန်သောနှစ်ဦးစလုံးတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်နိုင်ငံတကာကဒီပန်းကန်စျေးကွက်, နိုင်ငံ၏အလွန်အမင်းများများစားစားရောင်းဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်၏အမျိုးသားရေးပန်းကန်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည် ဒိန်ခဲ. ငါတို့သည်သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ရွှင်လန်းကြ၏, အဘယ်သူသည်အရည်ကျိုဒိန်ခဲနှင့်ပေါင်မုန့်ကိုကြိုက်မထားဘူး? ခြောက်သွေ့နှင့်သင်၏ဖွန်ဒူးတွဲ ဝိုင်ဖြူ, နှင့်နှစ်ကြိမ်ကျဆင်းဖို့မသေချာပါစေ!
ကအချိန်ရဲ့ စစ်မှန်သော ခင်ဗျားဆွစ်ဇလန်ကိုသွားရတာပေါ့ – ချောကလက်! ဆွစ်ဇာလန်က၎င်း၏ချောကလက်အဘို့အတော်လေးကျော်ကြား, ထို့အပြင်နိုင်ငံအနှံ့ရှိလမ်းထောင့်များတွင်ဇိမ်ခံချောဆီအမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့နိုင်သည်, သို့သော်, ဇူးရစ်က၎င်း၏အများအပြားချောကလက်ခရီးစဉ်များအတွက်ကျော်ကြား. မှချောကလက်ခရီးစဉ်တစ်ခုရှိသည် တိုင်းဘတ်ဂျက် fit! စနေနေ့ကိုယူနိုင်ပါတယ် နံနက်ခင်းလမ်းလျှောက်ခြင်း အရာမြို့အတွက်အကောင်းဆုံးချောကလက်အချို့နှင့်အတူမွို့ပျေါလှဲပေါင်းစပ်. သငျသညျသေးငယ်တဲ့ချောကလက်စက်ရုံတစ်လှည့်လည်တာကိုကြိုးစားကြလိမ့်မယ်, နှင့် အတှေ့အကွုံ သင့်ကိုယ်ပိုင်အောင် ချော့ကလက်ပြား. အမှန်တကယ်ဇိမ်ခံနွေရာသီလှုပ်ရှားမှုအတွက်, တစ်ချောကလက်ယူ လှေဖြင့်ခရီးစဉ် ယင်းမှ Lindt နှင့် Sprungli အလုပ်ရုံ.
Zurich ရထားကြိမ်မှ Interlaken
Lucerne Zurich ရထားအချိန်
Zurich ရထားကြိမ်မှ Bern
ဂျီနီဗာမှ Zurich ရထားအချိန်
ရလား, ယခုသင်ဖွင့်ပွညျ့စုံကွောငျးနဲ့ချောကလက်နဲ့ချိစ်, နောက်တဖန်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အချိန်က! ဆွစ်တောင်များဖွင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနှင်းလျှောစီးအဘို့မဟုတ်! ရှိပါတယ် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာနွေရာသီဘာ့ဂ် သင်တို့ရှိသမျှသည်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းသွားနိုင်သည်ကို, ဒါပေမယ့် Jungfrau ဒေသသင့်ရဲ့ရေပုံးစာရင်းတွင်မြင့်သောတက်ဖြစ်သင့်. အဆိုပါ Jungfraujoch မှာဥရောပတိုက်တွင်အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုဖြစ်ပါတယ် 3,454 မီတာ (~ 11.330 ခွကေို) နှင့်အမြင်လွဲချော်မဖြစ်သင့်. အကယ်၍ သင်ဟာကြီးမားတဲ့ခရီးသည်မကြီးဖြစ်လျှင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးသင့်ကိုပို့ဆောင်ပေးမည့်ရထားလမ်းတစ်ခုရှိတယ်, သို့မဟုတ်သင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွင်းမှာသွားရောက်ကြည့်ရှု. သင်တစ်ဦးစိန်ခေါ်မှုတက်သည်မှန်လျှင်, ဤလမ်းကြောင်းအချို့ကိုထုတ်စစ်ဆေး ဒေသတွင်း၌. လမ်းကြောင်းအတော်များများဟာလမ်းတစ်လျှောက်ဒဏ်ငွေအစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာထူထောင်မှုများ, ဒါကြောင့်စိတ်ပူစရာမလို, သငျသညျကြမ်းတမ်းကြောင့်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်!
သငျသညျဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဆိုအကြိုက်ဆုံးနေရာများရှိသည် Do? ကျွန်တော်တို့ကိုသိပါစေနှင့်မေ့လျော့မနေပါနဲ့, အကောင်းဆုံးကိုက်ဘ်ဆိုက်မှ အမိန့်လက်မှတ်များလေ့ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားဖြစ်ပါသည်
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-experiences-switzerland-winter-summer%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / ja သို့မဟုတ် / နှင့်အခြားဘာသာစကားများရန် / zh-CN ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
ငါသည်ငါ့ခင်ပွန်း Patryk နဲ့သမီးမီယာနှင့်အတူကမ္ဘာကြီးကိုခရီးသွားနေပါတယ်. အကြှနျုပျ၏အဓိကရည်မှန်းချက်ညျ့အဝမှသူတို့ဘဝအသက်ရှင်ဖို့အခြားသူတွေလာအောင်နှိုးဆွဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏အိပ်မက်များလိုက်ဖမ်းရပ်တန့်ဘယ်တော့မှ! - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ